Ogaden News Agency (ONA) – Bayaan JWXO: Maleeshiyada OPDO oo Xasuuqday Shacabka Soomaalida Ogadenya.
Bayaan JWXO: Maleeshiyada OPDO oo Xasuuqday Shacabka Soomaalida Ogadenya.
Posted by ONA Admin	/ November 25, 2017
Todobaadadii lasoo dhaafay ayaa boqolaal kamid ah shacabka Soomaalida Ogadenya waxaa xasuuqay maleeshiyaad u gaar ah kooxda OPDO, waxay kaloo ka baro-kiciyeen dhulkoodii gaar ahaan dedmooyinka kala ah Moyale, Nageile, Gindir, Qubi, Mayumuluqo, Mulli, balbalayti, Meiso, Diri-dhabe , Babile iyo kuwo kale oo badan oo ku teedsan xadka Ogadenya iyo Oromiya ay wadaagaan.
Maleeshiyaadkan oo gacan ka helaya booliska Ururka Oromada ee OPDO oo ka tirsan Xisbiga u taliya Itoobiya oo loo yaqaano EPRDF ayaa xasuuqay shacab aan waxba galabsanin iyagoo adeegsanaya hub, baangado iyo qalab kale. Dadkan la xasuuqay ayaa waxaa kamid ah dumar iyo caruur aan waxba galabsanin oo biri-magaydo ah, waxaa kale oo la gubay tuulooyinkii uu shacabkan deganaa isla markaana waxaa la boobay hantidii ay lahaayeen oo idil. Dhulkoodiina waa laga soo barakicinyaa.
Shacabkan la baro-kiciyay ayaa wali waxay ku sugan yihiin halis aad u daran oo kaga imanaysa boolis ku sheega OPDO iyo maleeshiyaadka hoos tago oo dhibaatooyin baahsan ku haya shacabkan ay kasoo qixiyeen dhulkoodii, kuwaas oo ay lasoo daristay macaluul iyo hoy la’aan daran taasoo ku qasabtay qaar badan oo kamid ah inay lafahooda uga qaxaan deegaankoodii. Waxaa intaas dheer in kooxda OPDO ay dhaawicii shacabkan ka hor joogsadeen in lagu daaweeyo isbitaalada taasoo ka dhan ah banii’aadminimada iyo xeerarka caalamiga ah.
Maleeshiyaadkan waxaa soo abaabulay isla-markaana soo hubeeyay kooxda OPDO. Qorshahan guracan wuxuu ka mid yahay mashruuc balaadhan oo ay dabada ka riixayaan kooxda EPRDF. Qorshahan ayuu Gumaysigu uga golleeyahay in lagu mashquuliyo shucuubta gobanimodoonka ah si culayska saaran taliska Itoobiya lagaga khafiifiyo oo carada shacuubta gadooday looga weeciyo hadafkooda oo dagaal sokeeye looga dhex abuuro labada shacab ee Ogadenya iyo Oromiya.
Ciidanka Itoobiya ayaa si toos ah ula socda xasuuqan iyo baro-kicintan baahsan ee lagu hayo shacabka Soomaalida Ogadenya balse aan diyaar u ahayn inay wax ka qabtaan, iyadoo maamulka gumaysiga uga wakiilka ah dhulka Somalida uusan kamid ahayn isbahaysiga magac u yaalka ah ee EPRDF iyo Ciidanka Itoobiyaba, meesha ay kooxda OPDO kamid tahay xisbiga dalka xukuma, ciidanka Itoobiyana ay awood badan ku leeyihiin, taasoo ka dhigaysa dhibaatada taagan mid hal dhinac uun xogta laga dhigaysanayo, loona hiilinayo, halka dhinaca Somalidana la gacan bidixaynayo oo Talada dalka Itoobiya ay marti ku yihiin, in kastoo adduunka loo sheegayo inay qayb ka mid ah yihiin.
Waxaa iyana ayaan daro ah in Wax-garadka, Qurbo-joogta iyo Saxaafada Oromiya ee sheeganaysaa inay xaq u diriri yihiin oo dowladda Itoobiya dadkooda dhibayso dhinac ka noqdeen xiisadan u dhaxaysa labada shacab ee Soomaalida Ogadenya iyo Oromiya oo ay fududaynayaan barnaamijka looga jeedinayo cadowgooda aasaasiga ah ee gumaysanaya oy dadkooda ku guubaabinayaan inay Somalida la dagaalamayaan, meesha ay Jabhada (JWXO/ONLF) dadaal badan galinaysay sidii xal loogu heli lahaa dabinada iyo dhagaraha uu Gumaysiga u maleegayo labada shacab ee walaalaha ah isla markaana loo fashilin lahaa.
Jabhada (JWXO/ONLF) waxay si kulul u cambaaraynaysaa xasuuqa iyo baro-kicinta ka dhanka ah shacabka Soomaalida Ogadenya, sidoo kale waxay Jabhada (JWXO/ONLF) cambaaraynaysaa dhibaato kasta oo loo gaysto shacabka Oromiya. Jabhada (JWXO/ONLF) waxay ugu baaqaysaa labada shacab Ogaden iyo Oromo inuusan isu adeegsanin Gumaysiga Itoobiya ee ay labadooduba ku hoos dulman yihiin.
Waxay Jabhada (JWXO/ONLF) ugu baaqaysaa beesha caalamka sida Qaramada Midoobay, Midawga Africa, Midawga Yurub iyo hay’adaha kale ee gobolka in culays lagu saaro taliska Gumaysiga Itoobiya in la joojiyo dhibaatada iyo xasarada laga dhex abuurayo shucuubta ku hoos dulman gaar ahaan Soomaalida Ogadenya iyo Oromiya.
Shacabka Soomaaliyeed ee Oromadu ka lsoo barakicisay degaanadoodii
Nin Somali ah oo policeka OPDO iyo maleeshiyada Oromadu toogteen
Askarta OPDO iyo Maleesiyada Oromada oo dadka xasuuqaysaa
Somalida oo maydkoodii aasanayaa